Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi imithwalo yemvelo ephakama ngesikhathi sokugijima iphumelela kakhulu empilweni nasekuboneni komuntu. Umthamo wamaphaphu uyanda, umzimba uzuza amafomu amahle, imisipha nezitsha ziqiniswa, isimo senhliziyo sithuthuka. Ukugijima kudinga imithombo eminingi yamandla (cishe i-kcal 100 ngekhilomitha ngalinye), futhi ngokuhambisana nokudla okufanele ngesikhathi esifushane, ingaholela ngisho nomuntu onganakwa kakhulu e-oda eliphelele.
Indlela yokusebenza kahle ukuze ulahlekelwe isisindo?
Umzimba kumele ujwayele ukusebenza, njengendlela evamile yansuku zonke. Kulokhu, udinga ukugijima, okungenani izikhathi ezine ngesonto, kodwa kungcono uma ugijima nsuku zonke. Ngaphambi kokugijima, udinga ukufudumala imisipha yakho ngokwenza izivocavoca noma uqale ngokuhamba.
Ukuphefumula kahle kubalulekile futhi: kufanele kube bushelelezi kanye nesigqi. Uma unomuzwa wokuthi ukuphefumula sekuhambanga kahle - kunciphisa ithempo bese uzama ukuyibuyisela.
Yenza ukusheshisa okukodwa noma ezimbili, okuhlala isikhathi eside kwamasekhondi angu-30-45 - kuzosiza ukucindezela amandla amaningi emzimbeni wakho, futhi ngenxa yalokho, ushise amafutha engeziwe. Kodwa qaphela futhi ubale amandla akho, ngoba imithwalo esindayo iyolimaza impilo yakho kuphela.
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, ukugijima kuchitha amaningi ama-kilojoule, okumele ngandlela-thile igcwaliswe. Ngakho-ke, udinga ukwenza ukudla okuzokunikeza zonke izinto ezidingekile ukwakheka okufanele kwesibalo. Umzimba akufanele ususwe, kepha akufanele kube kakhulu. Njengomthetho, ukudla kusho ukunciphisa ukudla, okuqukethe inani elikhulu lama-carbohydrate. Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi ama-carbohydrates ayimithombo yamandla, ngakho-ke kuyadingeka nganoma yimiphi imithwalo. Kungcono ukungenzi izingozi bese uxhumane nodokotela wezinsuku ongathola "igolide" kusho wena.
Inhlangano yokuqhuba amakilasi
Okokuqala, udinga ukuthola ukuthi awulimazi impilo yakho ngalolu hlobo lomthwalo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuhlolwa ngokugcwele kwezokwelapha futhi uqinisekise ukuthi ayikho inqunquthela. Thola izicathulo ezikhululekile ezingeke zigubhe izinyawo zakho futhi zidale ezinye iziphazamiso. Ngaphambi kokuba uqale imodi yezemidlalo yakho, udinga ukuba nedayari. Kuyo uzobhala phansi ama-khalori ayesetshenziswe futhi asetshenziswe, isisindo, ibanga, elihamba phambili, inhlalakahle ngokomzimba ngemva kokusebenza. Ngakho-ke, uzoqapha intuthuko yakho futhi wenze, uma kunesidingo, noma yiziphi izinguquko. Ekuqaleni kokuqeqeshwa, ungathola isisindo esincane, kodwa ungesabi - lokhu kuyisisindo "esinempilo" esanda ngenxa yokwanda komzimba.
Kunezinhlelo eziningi ezenzelwe abantu abafuna ukugijima ukulahlekelwa isisindo. Kodwa kuyalinganiselwa, ngoba umuntu ngamunye ubona umthwalo ngendlela yabo. Lolu hlelo luyingxenye yokugijima ngesivinini se-10-11 km / h futhi uhamba ngesivinini esisheshayo. NgeSonto-ivaliwe.
Iviki inomboro 1
NgoMsombuluko, ngoLwesithathu, uLwesihlanu - ugijima ngomzuzu owodwa, ukuhamba okusheshayo - amaminithi amathathu, Shintsha ukugijima ukuhamba nokubuyela emigqeni engu-10.
NgoLwesibili noLwesine - ukuhamba imizuzu engu-25.
NgoMgqibelo - uhamba ngezinyanga ezimbili, ugijima - imizuzu engu-1.5.
Iviki inomboro 2
Imijikelezo yoMsombuluko - 10, njengasevikini lokuqala, ukuhamba kuphela kugcina imizuzu engu-1.5, futhi kusebenza - amaminithi amabili.
NgoLwesithathu - imijikelezo engu-7: imizuzu emithathu-egijima, 1.5 imizuzu - ukuhamba. Ekupheleni komsebenzi, imizuzu engu-2 yokugijima ngokushesha.
NgoLwesihlanu noMgqibelo - imijikelezo engu-6, imizuzu engu-4 - egijima; 1.5 imizuzu - ukuhamba ngokushesha.
NgoLwesibili noLwesine - ukuhamba ngokushesha imizuzu engu-30.
Iviki inomboro 3
NgoMsombuluko nangoLwesithathu - imijikelezo engu-6 yokugijima imizuzu engu-4 nokuhamba ngokushesha ngomzuzu owodwa.
ULwesihlanu noMgqibelo - imijikelezo engu-4: ukugijima - imizuzu engu-6, ukuhamba okusheshayo - 1.5 imizuzu.
NgoLwesibili noLwesine - ukuhamba okusheshayo kwemizuzu engu-30.
Isonto leviki 4
NgoMsombuluko - 4 imijikelezo yokugijima imizuzu engu-8 nokuhamba ngokushelela imizuzu engu-1.5.
NgoLwesithathu - 3 imijikelezo, ugijime imizuzu engu-9, ukuhamba ngokushesha - imizuzu eyi-1.5.
NgoLwesihlanu noMgqibelo - ngomjikelezo owodwa, imizuzu engu-10 inikezelwe ukugijima, nokuhamba - imizuzu engu-11.
NgoLwesibili noLwesine - ukuhamba ngokushesha imizuzu engu-35.
Emva kwazo zonke lezi zinyathelo, hlola ngedayari yakho bese uhlola umphumela. Khona-ke ungakwazi ukwengeza umthwalo. Akunconywa ukuthi uyinciphise, kepha uma uzizwa ukuthi kuba nzima kakhulu, phinda uphindaphinda umjikelezo okhethiwe kuze kube yilapho uqiniseka ngamakhono akho.
Khumbula, ifomu elihle lomzimba linomthelela omuhle empilweni yakho, kokubili ngokomzimba nangokomoya. Emva kwakho konke, uma ufinyelela imigomo yakho, uphakamisa irekhodi lakho kanye nebha yokuzihlonipha kwakho kanye nebha. Inhlanhla, emizamweni yakho yezemidlalo.
Indlela yokuphambanisa imisipha yomzimba oblique
Ukuzivocavoca ukuqeda isisindo esiningi
Uhlobo luni lwezemidlalo lokukhetha owesifazane ngemuva kweminyaka engamashumi amane
Ziyini izigqoko zokubhukuda echibini?
Isinkwa esinama-cheese nama-guava
UMikhail Gorbachev oneminyaka engu-86 ubudala "wahlukana" esitolo sokudlela enamantombazane amancane, isithombe
Indlela yokwenza umfana athole imfundo ephakeme?
Amaqebelengwane omuncu omuncu
USergei Lazarev wanquma ukugcoba i-Dima Bilan emaciated
I-Horoscope NASA ka-2018 yezibonakaliso ezingu-13 ze-zodiac
Siyakuhalalisela kakhulu ngo-Mashi 8, 2018 evesini nase-prose
Ukugqamisa kwe-Venetian - ukuthambekela kwakamuva emhlabeni wezemfashini
Indlela Yokwenza I-Eye Makeup Makeup
I-Celery izimpande, izakhi zokwelapha
I-salmon egqoke i-salmon nelayisi nesipinashi
Izambatho ezijatshiwe ezihlotsheni izinaliti
Ukwesaba ukubeletha, ngesaba ukufa ngokubeletha